vaovao mikoriana | ny tsy manam-petra tontolo izao voarindra
Space antontan-kevitra manomboka ny hosasana ho afaka ny voajanahary. Ary aza mahita mety ho iray ihany, izay tsy mety mahita.
izany structure Izany dia eo ambany fanaraha-maso manokana ny fiahiana sy ny Izao Rehetra Izao tsy manam-petra ary misolo tena ho azy mahaliana.
Present vaovao nivezivezy araka ny Common Space fifanarahana.
tsirairay miangatra mieritreritra satria (toetra), Nianatra ny ara-vokatry ny asa ny fikarohana sy fanandramana in isan-karazany, dia mivoatra na fanatsarana efa misy Ny fomba fijery ny rafitra manokana. maneho, tsy misy karazana mitovy karazana, na fitondran-tena iray-rindrina, fanajana, fanehoan-kevitra amin-javatra hafa, ary, na inona na inona mihoatra noho ny, Ahoana no Ny fijery manokana, araka ny tokony ho ny afovoan-tany fandriampahalemana. Zavatra niainany, manampy olombelona, afaka tena fanatsarana sy fanao fampandrosoana amin'ny alalan'ny manokana tafika ary, misy ny, fahaiza-manao, tsy nangalatra Powers sy ny fahaizany ny hafa.
Tsy porofon'ny isika, fa efa Tsy: ho antsika no axiom ny, Hitantsika fa (na inona na inona ny taova ny fahitana sy ny fomba hahita). ary, fa efa Tsy mampiasa, mba hampitombo ny boky ho azy olona fiainana, amin'ny teny hafa velona fahatsapana, fenoy tsirairay Ny iray Us. mitombo ny boky ny velona afa-po tsirairay singa tokana zavatra, mampitombo boky ny fiainana ao amin'ny ankapobeny. izany asa tsirairay Ny iray Us, ary samy mandray anjara, nanomboka tamin'izay, izay mametraka fiainana in tenany.
Izay mety ho fikasana hamorona Na izany na tsy ambaratongam-fitsabahana na ny sakana voajanahary Development na inona na inona zavaboary, hita na aiza na aiza Izao Rehetra Izao tsy manam-petra, heverina ho herisetra ny fiainana sy ny fikasana hamono olona amin'ny maha-olona zavaboary ary ny fiainana amin'ny ankapobeny. Porofo fa ny tsipiriany (amin'ny ohatra) voalaza etsy ambony. Ary toy izany fisehoana, asa, fironana raisina, heverina, dia mitovy amin'ny iniana, Ny dokambarotra saina sy ny dikany ady manodidina Izao Rehetra Izao tsy manam-petra, izay tompon'ny fiainana mirindra (amin'ny toe-javatra toy izany) misy ezaka manao izay miharihary fananiham-bohitra. Ary mamporisika ny fandraisana anjara ny sampan'ny tafika misy toetra, ampitahaina fa ny ratsy – tsy mihoatra ny vary ny fasika amin'ny tsy manam-petra Space. Koa, izany karazana fitondran-tena, heverina ho Mahatsiaro tena faniriana mpandika (Aho nitondra fahafahana ny Rights ny fahalalahana safidy) mahazo traikefa Vita ny fisiana avokoa.
Misy mihevitra fa nibebaka izy ireo zavaboary, mieritreritra sy mampihatra izany drafitra, Mahonon-tena izy ireo-tsaina, ny hatsaran-toetra izay fotsiny no tompon'andraikitra amin'ny asany. Tokoa Na izany na tsy anisan'ny toerana fotoana.
Raha misy olona te-fanamby antsika mba hanameloka izay asa natao, mihevitra ny tenany tsara – Afaka miatrika ny fanangonan-tsonia amin'ny Ny Filan-kevitry ny rehetra izao (Filan-kevitry ny anti-panahy efatra amby roa-polo ao amin'ny Baiboly). Ary noho izany ianao, Azo inoana fa, manana ny fangataham-bonjy andrim-panjakana ny fahefana, manao fifandraisana amin'ny Andriamanitra, toy ny Fiangonana, Castel, Tempoly sy ny hafa.(izay voatery foana zavaboary nahazo niditra Ambony Contacts), raha tsy manana anao manokana an-keriny ary ny mety hisian'ny fifandraisana. taorian'ny, mandray ny fangatahana avy motivés izao rehetra izao Council ny tsy azo iainana, na tsy tondraka asa avy amintsika – Ho fanatsarana ny fomba fifandraisana. raha tsy izany, hifaly misy.
Raha misy olona mitady mafy na mitady hametraka fanontaniana, manaraka matoky, izay voatery tsy maintsy manana valiny – dia tokony ho raisina:
1. Instant valinteny dia manome rehetra zavaboary, tonga ny fanjakana Somadxi (somato) amin'izao fotoana izao ny olana.
2. Miezaka manampy isika olombelona Afaka mamokatra be dia be ao an-tsaina mitovy computing, kajikajy, na mijery (ao an-tsaina) mirazotra fiasan'ny maro ny milalao toe-javatra araka izay.
3. isika hangoraka olombelona Rosiana karazana olona na inona na inona ny toerana misy.
4. raha ny fahatsiarovan-tena mbola tsy mahafeno ny fepetra ambony, fa ianao manana fanontaniana – valiny mety ho hita amin'ny alalan'ny Izao Rehetra Izao tsy manam-petra, Jaşi ary Goshi . Mba hahazoana valiny marina, alohan'ny mijery tsara raha atao ny mamolavola ny fanontaniana araka ny fanolorana ny ankizy tsotra:
A) Ilaina ny fanontaniana dia mazava ho anao. B) izany no tanjona. The) foto-kevitra dia tsy maintsy ho hita maso. D) Ny fanontaniana dia tokony hita taratra mahaliana. D) Hametraka fanontaniana ihany no tokony ho, raha tena tsy nahita valiny. Raha tsy izany dia tsy mijery mahalala fomba sy ara-kolontsaina, ary raha tsy dia mikendry ny mba mieritreritra ny tsy amim-pifaliana?
Io loharano io miankina Togo, Iza no matetika antsoina hoe andriamanitra. Ary koa rehetra tsy misy farany Space amin'ny ankapobeny, ary misy teboka Izao Rehetra Izao tsy manam-petra indrindra. na izany aza, toa anao… Ary raha misy tsy tia azy – Izany dia midika hoe olona iray no tsy tia azy, ary ny sasany aza dia ny karazana zavaboary, fa ny Rada. Misaotra anao.